Sheeramijka Malabka, Beddelka Catalytic, Matxafka Beddelka Katalytic - Hualian
Si weyn loogu isticmaalo baabuurka shidaalka, xamuulka naaftada, mooto, mashiinada caalamiga ah iyo kicinta warshadaha ayaa la xareeyay.
In ka badan 25 sano oo waayo-aragnimo ah
Pingxiang Hualian Chemical Ceramic Co., Ltd.waxa uu leeyahay nidaam R&D oo dhamaystiran, sii wad ka shaqaynta horumarinta tignoolajiyada alaabta iyo awooda wax soo saarka.
5+ sano oo dammaanad ah dhammaan qaybaha
Iyada oo loo marayo farsamadeena iyo shatiyadayada, alaabadayada beddelka ah waxay ka dhigi karaan gaaska qiiqa qiiqa gaadhiga heerka Euro Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ,Ⅵ.
Ku raaxayso gaarsiintayada degdegga ah & bixinta bilaashka ah
QAYBO TAYO LEH
Dhammaan qaybaha aan iibino waa shahaado.
Chery iyo Jingdong Auto Mal...
Yurub waxay ku dhawaaqday ammaan badan...